War bixin: Maxaa ka qaldan Kooxda Real Madrid | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
War bixin: Maxaa ka qaldan Kooxda Real Madrid
(27-9-2018) Daafaca kooxda Real Madrid iyo xulka Prazil Marcelo ayaa xalay dhaawac soo gaaray waxaana lasheegayaa inuu mudo xidiga garoomada ka maqnaanayo.
Xiddiga ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee kulanka baxay isaga oo dhaawacan taas oo dhirbaaxo ku ah kooxda Real Madrid iyo Tababare Julen Lopetegui maadama uu xiddigu yahay mid muhiim ka ah kooxda.
Wargayska MARCA ayaa sheegaya in uu xiddiga reer Brazil ka maqnaan doono kulanka muhiimka ah ee ay sabtida la ciyaari doonaan koxda Atletico Madrid kulanka Derb Madrid kana tirsan todobaadka 7-aad ee horyaalka La Liga.
Real Madrid ayaa guuldaro xanuun kulul kala kulantayy kooxda Sevilla kadib markii ay guuldaro 3-0 ah kala kulantay Sevilla xilli ay fursad u haystay in ay la wareegto hogaanka horyaalka kadib guuldaradii Barcelona.
Marcelo ayaa kulanka ka baxay daqiiqadihii ugu dambeeyay taas oo keentay in ay kooxda Real Madrid 10 xiddig ku dhamaysato ciyaarta intii ka hadhay ciyaarta kadib markii uu tababaruhu wada dhameeyay badalkiisiii.